Magaalada Beledweyne oo xaalad deganaansho ah ay ka jirto | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Magaalada Beledweyne oo xaalad deganaansho ah ay ka jirto
Magaalada Beledweyne oo xaalad deganaansho ah ay ka jirto
Waxaa xaalad daganaansho ah laga Dareemayaa Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan oo xalay ilaa iyo saakay ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeyay Ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa Jabhada uu hoggaamiyo Sarkaalka lagu Magacaabo Jeneraal Abuukar Xuud ee diidan Maamulka Hirshabeelle.
Dadka deegaanka qaarkood oo la hadlay warbaahinta Gudaha Soomaaliya ayaa waxay u sheegeen in dagaalka dhacay uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, isla markaana uu ku geeriyoodeen labo qof, halka ilaa shan qod ay ku dhaawacmeen.
Ciidanka Jabhada Jeneraal Xuud oo markii hore weerar kusoo galay Magaalada Baladweyne ayaa Maanta Magaalada dagaal looga Saaaray waxayna dib uga laabteen halkii ay Markii hore ka yimaadeen.
Ciidamo farabadan oo ka tirsan Dowladda dhexe iyo Maamulka Hirshabeelle ayaa lagu arkayaa waddooyinka Magaalada Beledweyne, isla markaana xiray wadooyinka Qaarkood oo ay dadka iyo Gaadiidka u diidayaan inay maraan.
Weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Maamulka Hirshabeelle oo ay kaga hadlayaan dagaalkii xalay iyo saakay ka dhacay xaafadda Nuur Xawaad ee Baladweyne kuna sii fiday Xaafado kale.
Dagaalkaan ayaa yimid kadib weerar ay soo qaadeen Jabhada uu hoggaamiyo Jeneraal Abuukar Xuud kuwaasoo kasoo horjeeda Shirka Golaha Wasiirada Maamul Goboleedka Hirshabeelle oo Maanta markii ugu horreysay lagu qabanayo Baladweyne tan iyo markii la doortay Madaxweyne Cali Guudlaawe bishii November ee Sanadkii hore.
Janaraal Abuukar Xuud ayaa ka hadlay dagaalka ka dhacay Beledweyne iyo waxa dhaliyay.
Wuxuu sheegay in dagaalka uu ka dhashay kaddib dhowr iyo toban wasiir ka tirsan hirshabeelle oo yimid Beledweyne doonayana inay shir ku qabtaan magaalada, isagoo sheegay inay isku ogaayeen inaysan soo gelin magaalada Wasiirada Ama Madaxweynaha Hirshabeelle.
Generaal Xuud ayaa sheegay inay sii ogaayeen in madaxweynaha Hirshabeelle iyo xubno kale ay ku sugan yihiin magaalada sida uu hadalkiisa u dhigay.
Wuxuu sheegay in wasiirradu isku dayeen inay awood adeegsadaan, isagoo Tilmaamay in dhankooda dagaalka ay kaga dhaawacmeen labo askari aysana ogolaan doonin in wax Tiyaarad ah ay ka soo dagi Karin Magaalada Beledweyn.
Previous articleDowladda oo loogu baaqay inay adkeyso amniga Elgeyo Marakwet
Next articleDHAGEYSO:Wakiillada maamulka Puntland oo u codeeyay xeerar wax laga beddelay